२१-२२ बर्ष लागेकी युवतीले राजधानीको सडकमा भनिन्, ‘दाइ दाइ २५० रुपैयामा जाने हो ?’ – Etajakhabar
२१-२२ बर्ष लागेकी युवतीले राजधानीको सडकमा भनिन्, ‘दाइ दाइ २५० रुपैयामा जाने हो ?’
म स्नातक सक्किए पछी गाउ बाट पहिलो पटक काठ्माण्डौ शहर पसेको थिए ।उसरी त त्यो काठमान्डौ सगर मलाई निको लागेको थिएन ।त्यहाँको कोलाहल र त्यहाँको हो हल्ला मलाई चित्त बुझ्दैन थियो तर के पो गर्नु ? म त त्यहाँ पढ्न पो गाको त । गाउ म सारै मिस गर्थिए किनकी त्यो शहरमा मैले चिन्ने कोही थिएन । बसे त्यही कोठा भित्र मात्र हो ।
अब कोठा भित्र मात्र बसेर पढ्नु पनि कती ? निकै झेझो लाग्थ्यो । म गाउका काले , रामे , सन्ते सबैलाई मिस गर्थिए । तर जती नै मिए गरे पनि दुई चार बर्ष त मलाई एही काठमाण्डौ मै बसेर पढाई सक्नु थियो । दिन बित्दै जादा , म केहि धेरै थोरै काठमण्डौमा रम्न थालेको थिए । केहि हद सम्म अब नया नौलो ठाउ लाग्थेन । अब म केहि समय बिते पछी घुम्न निस्कने पनि गर्न थालेको थिए । मेरो कोठा पुतली सडक तिर थियो ।
म अक्क न बक्क परे । के भनेको होला ? कहाँ जाने भनेको होला ? यही सब कुरा एकै पटक प्रश्न बुनिदै गए । म सुने नसुने झै गरी त्यहाँ बाट हिडिदिए । केटी देख्दामा सारै राम्री थिई । करीब २१-२२ बर्षकी हाराहारीमा थिई । गालामा सानो डिम्पल पनि पर्दो रहेछ । हल्का मोटी मोटी गोरी गोरी । एकदमै हस्मुख खाले उज्यालो अनुहार थियो ।
म केहि बेरमा कोठा आईपुगे तर मेरो मन र दिमाग भने त्यही रत्नपार्क मै थियो । को होला ? के गर्न लाको होला ? किन मलाई बोलाको होला ? के २५० रुपैया भनेको होला ? म त्यही प्रश्न हरु आफैमा बार बार गरिरहेको थिए । प्रश्न हरुले गर्दा खाना बनाउन पनि मन लागेन । त्यो दिन बिहानकै बचेको भात भुटेर खाए र रात भरी त्यही केटीको बारेमा सोचिरहे ।
तर १ घण्टा हुँदा सम्म पनि त्यो देखा परेकी थिईन । मनको बेचैनी सँग ५-७ खिल्ली त सल्काई सकेको थिए । फेरी सोछे अलि उता तिर पो छे कि ? म यता उता तिर उसैलाई हेर्दै घुम्न थाले अबसोस कतै भेटिन । र निरास हुँदै खोठा फर्कन थाले र बिचमा एउटा पसल बाट एउटा भोड्का किनेर हिडे । उसरी त म खासै जाड पिउदिन तर हिजो आज मन एकदमै अत्तालेको थियो । दिमागमा मनमा खासै प्रेसर नरहोस भनेर कहिले कसो तुच्च लगाईने गरेको छु । कोठामा बसी पेग लाउदै , उस्कै कुरा सोच्दै गए । अब भोली पनि जाने निधो गरे । ओहो आज पनि छैन त ,
मन खुशी भयो , आखिर आज त भेट हुने भयो भनेर्, मुस्कुराउदै पछाडी फर्किएर हेरे र मुस्कान त्यही बिलिन भयो , । अर्कै केटी परिछ । उसैलाई गएर केहि सोधु लाग्यो तर तब सम्म त्यो एउटा मोटरमा बसेर हुईकिएकी थिई । धेरै दिन बित्दा पनि मैले उसलाई भेटाउन सकिन । एकदिब केहि कामले बिहानै सुन धारा देखी भित्र तिर पसेको थिए ।घुम्दै गर्ने क्रममा मैले त्यो केटी त्यहाँ भेटे ।
एउटा सानो नानिलाई स्कुल बस चढाउदै थिई । म उसको नजिक गएर सोधे । कहाँ हराको तिमी ? याद छ एकफेरा रत्नपार्कमा तिमीले मलाई बोलाकी थियौ । म अर्को दिन बाट दिनहु जान्थे कहिले भेटेन । यती भन्न मात्र पाको थिए । साझ त्यही पुग्नु म त्यही हुनेछु भनेर उ एउटा गल्ली तिर लागी । मलाई भने साझ कहिले पर्ला भैईसक्यो । म पुगे ४ बजे तिर त्यहाँ ।
दाई २५० रुपैया हो नि पछी ल्याङ नगर्नु होला । म मुस्कुराई रहे । होटेल जाने कि कता ? म झसङ्ग भए , होटेल ? अ अवाक भए र बल्ल बल्ल म बुझ्दै थिए आखिर त्यो केटी को भनेर । पहिले बुझ्थे पनि कसरी ? गाउ बाहिर निस्केको थिएन र हाम्रो उता तिर खासै यस्तो कुरा चाल पाएको पनि थिएन । मेरै कोठा जाँउन , हुँदैन ? नजिकै छ ५ मिन लाग्छ ?
” हुन्छ ” भन्ने जवाव आएसी हामी हिड्यौ र कोठा छिर्यौ । उ भने हत्पत्त आफ्नो कुर्था खोली । एकदम गोरो सरीर , बक्ष पनि चट्ट मिलेको गोलो गोलो थिए ।
” कण्डम ल्याउनु भाको छ दाई ” ? ? म तिर हेर्दै उस्ले भनि । म लाजले नजर लुकाउदै थिए । ह्या दाई चाडो गर्नुन भन्या अहिले अरु पनि काम आउछ मेरो । म नजिक पुगेर उसको हाथ पकडेर बस भनेर उसलाई खाटमा बसाए । तिम्रो नाम के हो ?
दाई हाम्रो नाम हुँदैन । जसले जे भनेर बोलाउछ । हामी त्यही हो । बदनाम बाटोको गुमनाम मान्छे हो हामी । म अल्मल थिए ।उस्को कुरामा खुशी खोजु कि पिडा । यतिकैमा ” मेरो नाम सुष्मा हो ।” ल दाई चाडो गर्नुस अब । म हास्दै भयो म केहि गर्दिन , लिउ यो २५० रुपैया । उ म तिर अनौठो मान्दै हेर्दै थिई । पैसा लिई । हिड म तिमीलाई त्यही सम्म छोडी दिन्छु । ” नाई म गैईहाल्छु ।” लिउ यो मेरो फोन न शनिबार तिर आउन । हुन्छ भनेर उसले कोठा छोडेर गैई । शबिबार पनि आयो । दिउसो १२ बजे करीब नचिनेको न बाट फोन आयो । मलाई थाहा थियो । सुष्मा कै फोन हो भनेर । ” हलो , म सुष्मा ” अ! भनन सुष्मा के छ , हाल खबर । म यही कोठा तल छु । हेर्नुस त । म झ्याल बाट हेरे , नभन्दै सुष्मा रहेछ । खुशी लायो । ओर्लिएर तल गएर सुष्मालाई लिएर आए । मसँग त्यो दिन २ हजार रुपैया थियो खल्तिमा । ” लौ १००० रुपैया , अब चार घण्टा यही बस्ने ल ” ।
सुष्मा आफ्नो कुर्था फेरी फुकाल्न लागी । म उस्को हाथ रोक्दै ” पर्दैन सुष्मा , म त्यस्तो केहि गर्दैन , बसेर कुरा मात्र गरौन । सुष्मा बुटवल कि रहिन्छ । ५ बर्ष अघी भागी बिहे गरेकी । केटाले छोडेर हिड्दिए छ । कालीलो उमेर मै एउटा नानी पनि भएछ । लोग्नेले छोडे पछी । घर न माईत भएकी सुष्मा जिउ ज्यान पाल्न काठ्माण्डौ पसेकी रहिछ । जिउ ज्यान पाल्नको निम्ती त्यही जिउ बेचेर पैसा कमाउने भन्दा अरु सजिलो उपाए उस्ले भेटिन छ । हाम्रो यसै भेट हुँदै जान्थ्यो महिनामा केहि ४ -५ पटक ।
यो कथा जोकतन्त्र नेपालबाट साभार गरिएको हो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०६, २०७४ समय: १:२३:४२
प्रेमीकै आग्रहमा प्रेमीकाले गोली चलाउँदा प्रेमीको मृत्यु, हाँसो गर्दागर्दै गयो ज्यान, प्रेमीकाले जेलमा सम्झिँदै रुँदै काट्दैछिन् सजाय
स्कुलमा नै अन्तरवार्ता लिन पत्रकारहरुको लाइन लागेपछि यि बालकलाई दिइयो स्कुल नै छाड्न दबाब
१३ दिनसम्म भाइसंगै बाबुको किरिया बसेकी झरनाको जिब्रो समेत दुइ टुक्रा : भन्छिन् ‘बोक्सी हुँ म, आफैलाई ऐनामा हेर्दा कहिले काहीं डर लाग्छ’ झरना गुरुङ (भिडियो)
अामाबाबु नभएका लाशकाे यसरी हुन्छ अन्तिम संस्कार : १२ जनाको दाहसंस्कार एकै ठाउँमा ! ‘मैले बाँचेको जिन्दगी लाखौको सपना हुन सक्छ’ (भिडियो)
ठगी गर्ने पार्टीकै कार्यकर्ता भए पनि छाड्दिन : श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्ट